International Planned Parenthood Federation (ESEAOR) မှ Ms. Nora Murat, ြှegional Director ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) သို့ လာရောက်လေ့လာစဉျ။
Thu 25 Jan 2018 - 15:57
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၂၃ ရက်။
Asia Maternal and Child ြှှelfare Association မှ Mr. Shinichiro Yanagisawa, Senior Vice President ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) နှင့် အသင်းပိုင်မူလတန်းကြိုကျောင်းများသို့ လာရောက်လေ့လာစဉျ။
Thu 25 Jan 2018 - 15:49
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၂၁ ရက်နှင့် နို၀င်ဘာလ ၂၂ ရက်။
ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္လူးက်းရြာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင္ ့က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနတို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာျပည္သူလူထုအေျချပဳေရြ႕လ်ား က်န္းမာေရးေဆးခန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
Thu 25 Jan 2018 - 15:47
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥက်ကဌ ပါမောက်ခ ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင်က မေတ်တာစမ်းရေမူလတန်းကြိုကျောင်းတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အာဟာရထောက်ပံ့လှူဒါန်းစဉျ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၆ ရက်။
Thu 25 Jan 2018 - 15:43
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၆ ရက်။
အိန်ဒိယရေတပ်မှ Vice Admiral Bimal K Verma, AVSM, Commander-In-Chief, Andaman and Nicobar Command ၏ ဇနီး Mrs. Seema Verma, President of Defence ြှှives ြှှelfare Association ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း
Tue 23 Jan 2018 - 10:15
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်။
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီး ဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောပြည်သူလူထုအခြေပြုရွေ့လျားကျန်းမာရေးဆေးခန်းကို နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရွေးစုကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇
Tue 16 Jan 2018 - 15:35
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတွင် ကထိန်သကငျ်န်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ ကျင်းပပြုလုုပ်စဉျ။ ၂၄.၁၀.၂၀၁၇
Wed 03 Jan 2018 - 16:38
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၂၄ )ရက်နေ့
Thu 28 Dec 2017 - 15:09
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၉ -၂၀)ရက်နေ့
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းဥက်ကဌ၊ ဒုတိယဥက်ကဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၀င်များ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
Fri 22 Dec 2017 - 14:09
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် နှင့် ၁၄ ရက်။
နိုင်ငံတစ်၀န်း ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်ထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်း (၂၀၁၇) အသိပေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား ( ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇ )
Fri 22 Dec 2017 - 14:05